သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: my all time favourite
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 12:43 AM
ဒီပို့စ်ကို Comment ရေးမလို့ ချောင်းနေတာ ကြာပြီ- အင်မတန်မှ များပြားလှတဲ့ အတွေးစတွေ ဒီပို့စ်ထဲက ဆွဲထုတ် လို့ ကို မကုန်နိုင်ဘူး မအိမ့်ရေ- ကဲခုတော့ ဆရာဝန်တွေ ပြောသလို ရောဂါတိုင်း ရောဂါတိုင်း မှာ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါတယ် ဆိုတဲ့ အချက် မပေးနိုင် တဲ့ နေရာဟာ ရာခိုင်နှုန်း တခုအနေနဲ့ကို နေရာတခု ရှိတယ် ဆိုသလို .. Other Cause ဆိုပြီး ပဲ ထားခဲ့ လိုက်ပြီဗျာ-
This couple who are living together could be siblings (brothers, sisters,abrother andasister), oraparent and an off-spring. It’s very interesting that even in Canada, when one cooks, the person could be assumed as female gender. ကျွန်မမှတ်မိသေးတယ်။ မြုပ်ကွက်တွေ အများကြီး ပါနေတယ်ဆိုတာ သိရဲ့နဲ့တောင် အတန်းထဲမှာ အားလုံးနီးပါးက တshe ထဲ sheနေခဲ့တာပဲ။ ယေဘူယကြည့်ရင်တော့ မိန်းမက ယောင်္ကျားအလုပ်သွားနေတုန်း အိမ်အလုပ်မလုပ်ပဲ တခြားတယောက်နဲ့ သွားတွေ့တယ်လို့ ထင်မိကြနိုင်တယ်. It’sacombination of philosophy, critical thinking, and criminology. The bottom line is not about the case but to reveal “who we really are”. ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျေညက်အောင် စာဖတ်တတ်စေတဲ့အရာပါပဲ.. ကိုယ့်မှာ ရှိနေတဲ့ တွေးခေါ်မှု၊ ခံယူချက်၊ ယုံကြည်ချက်၊ အားလုံးက တကယ်တော့ လက်ဆင့်ကမ်းသယ်လာကြတာတွေ၊ အမွေလက်ခံရလာကြတာတွေပါပဲလို့ဆိုပါတယ်.. တကယ်ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်နိုင်ကြသူတွေ ရာစုနှစ်တခုမှာ တစ်ယောက်တောင် မရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့။ အစွဲတွေအားလုံးချွတ်ချခံထိလိုက်ကြတဲ့ ပရိဂျက်တခုပါ..
First, I thought that lack of loyalty to 'Ka'killed'Kha'. But, after I read your comment, I do not have any idea. I'd like to know more...
ဟုတ်တယ်မသီတာ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေက ဆွဲထုတ်လို့မကုန်နိုင်တော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ခက်တာက လူတွေဟာ တဖက်ထဲ ကိုပဲကြည့်တတ်ကြတာဝမ်းနဲစရာပဲ
ဒီပိုစ့် ကို ဖတ်တာလဲ အလွတ်ပြန်ရေးလို့ တောင်ရလောက်ပြီ....... ဘာကိုရည်ရွယ်မှန်းလဲ မသိဘူး.. တကယ်ကိုပဲ.. ကျနော်ဘာလို့ နားမလည်နိုင်တာလဲမသိဘူး... ဂွကျပြန်ပြီ... အချိန်ရရင်နည်းနည်းလောက်ရှင်ပြပါဦး...